Mivezivezy fanombohana 06 (2) FS2004 HOT
Toerana manodidina ny fandefasana ny toerana shuttles. Roa ny famoahana faritra mazoto. Ataovy ny safidy "misafidy ny sidina." Tsindrio mivezivezy fanombohana 06 sy hifidy ny fiaramanidina eto ambany. Roa niara ny famoahana ary avy eo tsy maintsy miandry 12 minitra teo anatrehan'ny-iray manaraka manomboka. Raha tsy hitranga, ary hamerina indray akaiky FS2004
Code Airport X68
Zava-dehibe: rehefa vita ny fametrahana atao amin'ny PC-nao dia tsy misy toerana ambara hanambarana satria add-on ny Fandefasana shuttle 06 (1).
Mivezivezy fanombohana 06 (1) dia tsy maintsy nametraka eo anatrehan'i mivezivezy fandefasana 06 (2).
Tsara sidina sy ny saina: Sarotra izany mafana!